ရင်သားလှချင်လို့ ပုံမှန်ဆေးသောက် ဆေးလိမ်းပြီး ထိန်းသိမ်းတယ် ~ ပက်ထရစ်ရှာ - Celebrities 8DaysaWeek - Journal
ရင်သားလှချင်လို့ ပုံမှန်ဆေးသောက် ဆေးလိမ်းပြီး ထိန်းသိမ်းတယ် ~ ပက်ထရစ်ရှာ
06 July, 2017, 01:19 PM
ဒီတစ်ပတ်ရဲ့ Cover Star ကိုတော့ 8days ပရိသတ်တွေနဲ့ မဆုံတာကြာပြီဖြစ်တဲ့ ပက်ထရစ်ရှာကို ရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ အမိုက်စားဖက်ရှင်တွေနဲ့ pose တွေ ကလည်း ပရိသတ်တွေ ကြိုက်ကြ လိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။
Q. လတ်တလောအနုပညာ လှုပ်ရှားမှုတွေဆိုရင်...
A. ကိုဇေရဲထက်၊ ကိုအောင်ရဲလင်းနဲ့ ကားရိုက်ထားပါတယ်။ ဒီကြားထဲမှာ အားနေတာကြောင့် ဂျာနယ်၊ မဂ္ဂဇင်းတွေကို ရိုက်ပေးဖြစ် နေပါတယ်။
Q. ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ရင့်ကျက် တဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ဖြစ် လာပြီလို့ သုံးသပ်မိလား...
A. ဒီအလုပ်လုပ်တဲ့အခါကျတော့ အလုပ်ကပဲ သင်သွားပေးတယ်။ အရင်ကဆို စိတ်ထားကကောင်းတယ်။ ပုံမှန်ပဲဆက်ဆံတတ်တယ်။ ကိုယ်အရမ်းရောလိုက်ရင် ဖားတယ် လို့ထင်သွားမလားလို့ စိုးရိမ်ရင်း ဆက်ဆံရေးမကောင်းဘူး။ သရုပ်ဆောင်ကောင်းပေမယ့် ဆက်ဆံရေးလိုတယ်လို့ အသံထွက်တော့ ကိုယ့် စီနီယာတွေက သင်ပေးပါတယ်။ ကိုယ့်စိတ်ထဲက ဘယ်လောက် ကောင်းကောင်း ဖော်ဖော်ရွေရွေ ဆက်ဆံနိုင်မှ လူတွေက ကောင်းတယ်လို့ ထင်ကြတယ်။ လူမှုဆက်ဆံရေး ကိစ္စကတိုးတက်လာတယ်။ နောက်ပိုင်းတစ်ခုခုဆို status မတင်တော့ဘူး။ ကလေးတုန်းကဆို စိတ်ထဲရှိတာ ဘာလေးပဲဖြစ်ဖြစ်တင်တယ်။ အခုတော့ ကိုယ့်အကောင့်မှာ အနုပညာနဲ့ ပတ်သက်တာပဲ တင်တော့တယ်။ ပြောချင်တဲ့အရာ အားလုံးထဲမှာမှ ကိုယ်တကယ်ပြောဖို့ လိုအပ်တဲ့ အကြောင်းအရာကိုပဲ status တင်တော့တယ်။ ခံစားချက်တွေ၊ ဟိုလူ့စောင်းပြော၊ ဒီလူ့ စောင်းပြောတွေ မရေးတော့ဘူး။
Q. ဟန်ဆောင်ကောင်းတဲ့ အနု ပညာရှင်ထဲမှာပါလား...
A. ဟန်ဆောင်ကောင်းတဲ့လူတွေ ထဲမှာမပါဘူး။ အပိုလည်းမပြောတတ်ဘူး။ ဘယ်သူ့ကိုမှလည်း စပြီးမ ရိုင်းဘူး။ ကိုယ့်ကိုစော်ကားလာတာ မျိုးဆိုရင် ငြိမ်ခံမနေတတ်ဘူး။ အပြင်မှာတွေ့တဲ့ ပရိသတ်တိုင်းကတော့ ချစ်သွားတယ်။ အပြင်သွားလည်း အပြင်လူတစ်ယောက်လို လွတ်လွတ်လပ်လပ် ပေါ့ပေါ့ပါးပါးပဲ။ မင်းသမီး ဆိုတဲ့ Mood ကြီးမသွင်းထားဘူး။ ဟန်ဆောင်မကောင်းလို့ စိတ်ထဲမှာ ရှိတဲ့အတိုင်းပြောလို့ အမုန်းခံရ တယ်။
Q. ဆိုးဆိုးဝါးဝါး တိုက်ခိုက်မှုမျိုး၊ ဝေဖန်မှုမျိုးကြုံလာရင် ဘယ်လိုမျိုး တုံ့ပြန်ဖြစ်လဲ...
A. ဝေဖန်လာတာတွေအများကြီး ရှိပါတယ်။ တုံ့ပြန်စရာမလိုလောက်တဲ့အရာဆိုရင်တော့ ဘာမှမပြော တော့ဘူး။ မသိချင်ယောင်ဆောင်ထားလိုက်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ကိုယ်ကျင့် သိက္ခာပိုင်းကို ထိပါးစော်ကားလာတယ်။ လိုတာထက်ပိုပြီး စော်ကားလာရင် စိတ်ထဲရှိတဲ့အတိုင်း ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဖြေရှင်းတတ်တယ်။ ဒါက ကိုယ့်ရဲ့ စိတ်ရင်းပဲပေါ့။
Q. ရင်သားနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တချို့က ခွဲစိတ်ထားတာလားလို့ ထင်နေကြတဲ့အပေါ် ဘယ်လိုပြောချင်လဲ...
A. အဲဒါနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လာမေးကြတယ်။ မေးတဲ့ကောင်မလေးတွေကိုလည်း ပြောပြပြီးပါပြီ။ ခွဲစိတ်တာ မျိုးလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ အရင်က ပုံလည်းအဲဒီလိုမျိုးရှိပါတယ်။ မိန်းကလေးဆိုတော့ လှချင်တော့ ရင်သားနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဆေးမှန်မှန်သောက်ပြီး ဆေးလိမ်းတယ်။ ဒါကတော့ မိန်းကလေးတိုင်းလုပ်သင့်တယ်လို့ ထင်တယ်။ အနုပညာရှင်မှ မဟုတ်ဘူး။ အပြင်က မိန်းကလေးတွေလည်း ထိန်းသိမ်းသင့်တယ်။
Q. ရင်သားခွဲစိတ်ပြီး ဆီလီကွန်ထည့်တဲ့ သူတွေကို အားပေးလား...
A. သူတို့လုပ်ချင်လို့ လုပ်တာပဲပေါ့။ တချို့က ဆေးသောက်တာကြာလို့ အစောင့်နိုင်ဘူး။ ဒါကတော့ ပိုက်ဆံတတ်နိုင်လို့ လှချင်လို့ လုပ်တာပေါ့။ အားပေးတယ်။ လှပဖို့ အတွက် တတ်နိုင်သလောက်လုပ်သင့် တယ်။ သာမန်မိန်းကလေးတွေလည်း ကိုယ်လှဖို့ ထိန်းသိမ်းသင့်တယ်။ ကိုယ်တိုင်လည်းလှဖို့ ထိန်းသိမ်းတယ်။
Q. လတ်တလော အချစ်ရေး က...
A. အချစ်ရေးကတော့ အဆင် ပြေနေပါတယ်။ ကိုယ့်အပေါ် တကယ်ကောင်းတဲ့ သူမျိုးကို ကိုယ်တိုင် သဘောကျကျနဲ့ ကျေကျေနပ်နပ် ရွေးချယ်ထားလို့ ကျေနပ်ပါတယ်။
Q. အချစ်ရေးကို အခုချိန်မှာ နှလုံးသားကို ဦးစားပေးလား။ ဦးနှောက်ကို ဦးစားပေးနေပြီလား...
A. သူများတွေကတော့အလကား နေရင်းနှလုံးသားနဲ့ ချစ်မနေနဲ့ ဦးနှောက်နဲ့ ချစ်လို့ ပြောကြတယ်။ ကိုယ်ကတော့ ကိုယ့်စိတ်နှလုံးက ချစ်ရင် ချစ်လိုက်တာပဲ။ ငွေကြေး ကိစ္စတွက်တာမရှိဘူး။ မိဘကိုယ်တိုင်က ဆုံးမပေးတယ်။ ကိုယ့်နှလုံးသား နဲ့ ရွေးချယ်ဖို့ပဲ သင်ပေးတယ်။ ကိုယ်တိုင်ကလည်း ငွေကြေးကိစ္စပြောလာရင် မကြိုက်ဘူး။ စိတ်ထဲက ဖြစ်ပေါ် တဲ့သူကိုပဲ နှလုံးသားနဲ့ ရွေးချယ်တယ်။
Q. 8days cover ရိုက်ရတဲ့ ခံစားချက်...
8days နဲ့မဆုံတာ တော်တော် ကြာပြီ။ ရိုက်မယ်၊ ရိုက်မယ်နဲ့ ကားရိုက်ဆက်နေတယ်။ ကိုယ်ကလည်း ဂျာနယ်၊ မဂ္ဂဇင်းတွေနဲ့ အဆက်မပြတ်ချင်ဘူး။ ဒီလို ဂျာနယ်၊ မဂ္ဂဇင်းတွေကြောင့်လည်း ပက်ထရစ်ရှာ ဆို တာဖြစ်လာတယ်။ အခုမှ ပြန်ဆုံဖြစ်တယ်။ ကိုယ်ခင်တဲ့ 8days နဲ့ ပြန်ဆုံရတာ ဝမ်းသာပါတယ်။ ပျော်လည်း ပျော်တယ်။